Tsarovy fa ny ratsy tsy handresy ny Fiangonan'Andriamanitra izany mihitsy.
8 novembre 2018 by Njaka Ramanandafy
SAMOELA VOALOHANY 5 : 1 – 12
5:1 Dia nalain’ny Filistina ny fiaran’Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda.
5:2 Ary nony efa azon’ny Filistina ny fiaran’Andriamanitra, dia nentiny tao an-tranon’i Dagona izy ka napetrany teo anilany.
5:3 Ary nony ampitson’iny dia nifoha maraina koa ny Asdodita, ka indro i Dagona potraka niankohoka tamin’ny tany teo anoloan’ny fiaran’i Jehovah; dia narenin’ny olona izy ka napetrany teo amin’ny fitoerany indray.
5:4 Ary nony ampitson’iny indray dia nifoha maraina koa ny olona, ka indro i Dagona potraka niankohoka indray tamin’ny tany teo anoloan’ny fiaran’i Jehovah, ary tapaka teo amin’ny tokonam-baravarana ny lohan’i Dagona sy ny felatanany roa; fa ny tenabeny ihany no sisa
5:5 (izany no tsy anitsahan’ny mpisoron’i Dagona, na izay miditra ao an-tranony, ny tokonam-baravaran’i Dagona ao Asdoda mandraka androany).
5:6 Ary navesatra tamin’ny Asdodita ny tanan’i Jehovah, fa nandringana azy Izy; ary nasiany vay ny tao Asdoda sy ny tamin’ny faritaniny rehetra.
5:7 Ary rehefa hitan’ny mponina tao Asdoda fa nisy izany, dia hoy izy: Aza avela hitoetra eto amintsika ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely; fa mavesatra amintsika sy amin’i Dagona andriamanitsika ny tanany.
5:8 Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin’ny Filistina hankeo aminy ka nanao hoe: Hataontsika ahoana ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely? Dia hoy ireo: Aoka hafindra hankany Gata ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely. Dia nafindrany ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely.
5:9 Ary rehefa voafindrany ny fiara, dia namely ny tanana ny tanan’i Jehovah ka nampangorohoro azy indrindra, fa Izy namely ny mponina tao an-tanana, na kely na lehibe, ka nisy vay nipoipoitra taminy.
5:10 Ary dia naterin’ny olona nankany Ekrona ny fiaran’Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran’Andriamanitra, dia nitaraina ny Ekronita nanao hoe: Efa nafindran’ny olona ho aty amintsika ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely hahafaty antsika sy ny firenentsika.
5:11 Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin’ny Filistina ka nanao hoe: Ampandehano ny fiaran’ny Andriamanitr’i Israely, ary aoka hoentina ho any amin’ny fitoerany ihany indray izy mba tsy hahafaty antsika sy ny firenentsika; fa nanerana ny tanana ny horohoron’ ny fahafatesana, fa navesatra indrindra tao ny tanan’Andriamanitra.
5:12 Ary ny olona izay tsy maty dia voan’ny vay kosa, ka ny fitarainan’ny tao an-tanana dia niakatra ho any an-danitra.
1-Ny fiara no babo fa tsy i Jehovah
Tsy i Jehovah no resin’ny Filistina na ny andriamanitr’ izy ireo no mahery , fa ny tsy fahamendrehan’ Israely no nanekeny azy ho babo . Ny voninahiny tsy omeny ny hafa na an’ny sarin-javatra voasokitra . I Paoly koa no azo nogadraina fa ny Tenin’ Andriamanitra tsy mba voafatotra (2 Tim 2.9). Mahery ilay Andriamanitra ivavahantsika .
2-Fitsarana ho an’ny mpanota ny fanatrehan’ Andriamanitra
Fahafatesana sy vay ratsy no nihatra tamin’ireo mponina izay nitana ny fiaran’ Andriamanitra . Tany Egypta koa dia nihatra tamin’izy ireo ny loza maro samihafa . Azy ianao, mahatsiaro fitahiana sa ozona ?
3-Manilika ny ratsy ho any amin’ny hafa hatrany ny olona
Rehefa hitan’ireo mponina fa mitera-doza ho azy ny fisian’izany dai ny namindra izany ho any aminn’y fitoerana hafa no nahamaika azy. Toa marina ilay ohabolantsika hoe: raha maty aho , matesa rahavana . Tsy mba toe-tsain’i Jesoa izany , izay nanaiky ho faty mba ho famonjena ny hafa . Ny mandini-tena sy mibebaka no mahamaika fa tsy ny manilika ny fahadisoana ho an’ny hafa .
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky hafa-3